Vaifona panhamba idzi 0778 818 559 chiregedzai zvenyu | Kwayedza
Vaifona panhamba idzi 0778 818 559 chiregedzai zvenyu
28 Aug, 2015 - 00:08	 2015-08-27T17:48:30+00:00 2015-08-28T00:00:46+00:00 0 Views
INI ndiri musikana ane makore 18 ndinotsvagawo mukomana ane makore 22 anoshanda. Nhare yangu 0739 071 037.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23 ndinodawo musikana ane makore 18 – 20 ave kuda zveimba. Anofona kana kutumira sms pa0778 141 307.
Makadini veKwayedza? Ndiri kutsvaga musikana ane makore 19 kusvika 23. Ini ndiri mukomana ane makore 23. Andifarira ndibate pa0777 141 412.
Vaifona panhamba idzi 0778 818 559 chiregedzai zvenyu. Zvakaita. Ndatenda zvangu.
Makadiiko? Ndiri murume ane makore 35 ndinotsvagawo mukadzi wekufambidzana naye ane makore 28 zvichidzika. Nhare yangu 0774 385 411.
Ndiri murume ane makore 50 nemwana mumwe chete, HIV negative uye ndinodawo mukadzi anove wechiShona kana kuti muNdevere ane makore 30 – 36 ane mwana mumwe chete ari pachokwadi. Ngaave ane rudo rudo nerukudzo, anopinda chechi yeMethodist kana Dutch uye akazvipira kufamba neni mubasa rangu randinoita. Handidi vanofona neprivate nhamba, WhatsApp neFacebook. Nhare yangu 0775 952 036.
Ini ndiri mukadzi ane makore 36 nemwana 1, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ari positive seni. Andifarira anondibata pa0779 337 948.
VeKwayedza ndibatsireiwo, ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana wekuroora. Ngaave mutsvuku ane rudo anoda zvemba. Ndibatei pa0778 683 551.
Ndinotsvaka mudzimai anoda imba ane makore 21 -33 ane mwana 1 kana 2 asi pfambi kwete. Ndine makore 36, nhare yangu 0717 497 657.
Ndiri mukadzi ane makore 23 ekuberekwa nemwana 1 ndinotsvakawo murume akavimbika anoda zvemba kwete zvekutamba. Vanondida ndibatei pa0776 003 686.
Ndinotsvagawo mudzimai wekuroora anogeza, mutsvuku ane makore 25-30 chero ane mwana mumwe. Ini ndine makore 38, nhare yangu 0733 093 006.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 28 ndinotsvagawo musikana ane makore 18-26 akavimbika. Ndinoshanda muHurumende, nhare yangu 0774 263 217.
Ndiri murume ane makore 42, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 25 zvichikwira. Zvimwe tinozotaura pa0777 880 533.
Ndiri musikana ane makore 20 ndinotsvakawo mukomana anonamata kumasowe ane makore 22 – 28 ari HIV negative. Ndinonzi Amanda, nhare yangu 0779 584 828.
Ndiri murume ane makore 23 ndotsvagawo mukadzi wekuroora ngaave anemwana mumwechete kana asina ndikarurama semukaka unoruramisa rusvava andifarira pa 0777042129.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndotsvagawo mukadzi ane mwana 1 kana asina ane makore 18 kusvika 22. Andifarira ngaandibate pa0777 042 129.
Makadini? Ndiri mudzimai ane makore 37 nevana vaviri ndinotsvaga murume ane makore 40 zvichikwira. Anoda zvekuroora ari pachokwadi ngaandibate pa0779 365 584.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri musikana ane makore 20 ndinotsvagawo murume ari pachokwadi. Anoda ngaandibate pa0771 189 154
Ndiri murume ane makore 28 nemwana 1 ndinotsvakawo mukadzi wekufambidzana naye murudo ane makore 35-38. Ngaave akanaka ari mukobvu zviri nani mutsvuku anogara muHarare. Asiri pachirongwa ane zvaanoitawo muhupenyu ngaandibate pa0717 577 004. Ndinoshanda muHurumende.
Rambai makadaro Vekwayedza nechirongwa cheTishamwaridzane pamwe ndichawana wangu. Ini ndiri mukomana ane makore 22 ndiri kutsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika asina chirwere. Andifarira ndibate pa0775 726 455.
Ndiri murume ane makore 41 ndinotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye anove mukobvu zvikuru. Nhare yangu 0771 685 543.
Ndiri murume ane makore 42 ndinotsvaga mudzimai ane makore ari pasi pe40 ane vane vasingapfuuri vaviri. Ngaandibate pa0779 274 236.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26 ndinoda musikana ari pachokwadi anonamata Pentercost. Ane makore 19-25 akanaka ngaandibate pa0776 578 925.
Ndiri mudzimai ane makore 40 ekuberekwa uye ndinotsvagawo murume ane rudo rwemhando yepamusoro anonamata. Anoda ngaandibate pa0735 434 573.
Makandini henyu veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana wekuwana ane makore 19 – 24 asina chirwere. Anoda kuongororwa ropa wemuHarare uye achinamata ngaandibate pa0774 118 984.
Ndiri mukadzi ane makore 41 nevana vaviri, ndinoshanda muHurumende uye ndinoda murume anoda zvekuroora asina mukadzi ane makore 42 – 55. Ndibatei pa0773 838 529.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 33 nemwana mumwe, HIV negative uye ndinoshanda.
Ndinodawo mukadzi wekuroora ane makore 22 kusvika 45, anoshanda pamwe akasimba zvakanaka. Anoonekera, anonamata anoda ngaafone pa0716 790 100.
Ndiri mukomana ane makore 26 nemwana 1 ndinotsvagawo mudzimai ane mwana 1 akazvipira kutorwa ropa. Nhare yangu 0777 454 787.
Ndinotsvagawo musikana ave kuda zvemba ane makore 18 kusvika 20 ari HIV negative. Ndine makore 20, ndinoshanda uye anoda nezvangu ngaafone pa0782 655 491.
Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo mukadzi wekuwadzana naye ane makore 20 – 29 ane mwana kunyangwe asina. Ini ndine mwana mumwe, ari pachokwadi ngaandibate pa0716 403 473.
Ndiri mukadzi ane makore 25, ndiri pachirongwa uye ndotsvagavo murume ari pachirongwawo. Ngaave anoshanda ane makore 30 kusvika 40, ane rudo. Nhare yangu 0738 086 945.
Ini ndiri mukomana ane makore 23 ndinoshanda uye ndinotsvaga musikana wekuvaka naye imba asiri pamushonga. Anenge andida ngaandibate pa0782 033 214.
Ndakambonyorera kuchirongwa chino asi handisati ndawana anondida. Ndiri mukomana ane makore 30 ndinotsvagawo musikana kana kuti mukadzi anoda kuita hushamwari neni. Nhare yangu 0776 045 831.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri kutsvagawo shamwarikadzi ine hutsanana, ine mwana kana isina. Ndinoshanda, handina chirwere uye anondida ngaafone pa0773 066 662.
Ini ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore ari pakati pemakore 18 ne20 asina utachiona hweHIV. Andifarira ngaandibate pa0783 268 778.
Makadii veKwayedza? Ndine makore 33 ndinotsvagawo musikana kana mudzimai ane makore 20 kusvika 30. Nhare yangu 0773 488 071.
Ndinonzi Lymon, ndiri kutsvagawo musikana ari pachokwadi ane mwana 1 kana asina ane makore 22 zvichidzika. Ari HIV negative ngaandibate pa0771 675 652.
Ndiri murume ane makore 33 nevana 2 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 25-30. Ngaave ari HIV positive asi asingaratidzike seni. Nhare yangu 0713 928 168.
Ndiri murume ane makore 38 ndinotsvagawo shamwari (penpals) mazera ose varume nevakadzi, vakarongeka uye vanoziva Mwari.
Ndibatei paWhatsApp pa0774 526 668. Ndatenda hangu.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvakawo musikana ari H I V negative ane makore 18 – 20. Nhare yangu 0783 658 379.
Ndinonzi Lackson Matemba, ndiri kutsvagawo mwana wangu anonzi Giverson Matemba.
Ndakapedzisira kumuona kuHwedza muna 1994. Vanomuziva kana kuti iye ngavandibatewo pa0775 826 176 kana 0716 756 604.
Ndiri murume ane makore 45 ndinotsvagawo mudzimai akavimbika wekumasowe. Nhare yangu 0774 074 117.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 20 okuberekwa ndinodawo musikana ane makore 18 -19 wekuroora. Nhare yangu 0783 139 880.